Ukwakhela Isizukulwane Esilandelayo Umhlaba Ongcono Umsebenzi Wethu – The Ulwazi Programme
Owaba ngumengameli wokuqala owakhethwa ngentando yeningi eNingizimu Afrika, uNelson Mandela, wake washo amazwi aphusile wathi:
“Akekho umuntu ozalwa nenzondo yomunye umuntu ngenxa yobuhlanga, imvelaphi noma inkolelo. Inzondo into abantu abafundiswa yona, kanjalo nangothando bangafundiswa ngoba uthando lungena kalula enhliziyweni kunenzondo.”
Umhlaba usazothatha injabulo yabo, kodwa sinalo ithuba lokwenza isiqiniseko sokuthi umhlaba abakhula kuwo, awufani nalowo thina esakhula kuwo
Lesithombe esingenhla siveza izingane ezingamantombazanyana amabili, enye ngeyomlungu kanti enye eyomuntu omnyama. Lezi zingane zibukeka zijabulile kanti ngiyakholelwa ukuthi zazijabule ngempela ngenkathi ngithatha lesi thombe ngonyaka odlule.
Yize lesithombe sikhombisa injabulo, njalo uma ngisibuka bengiba nokukhathazeka. Into ebingikhathaza kakhulu wukuthi siphila emhlabeni lapho umbala wesikhumba sakho, imvelaphi yakho, ulimi lwakho kanye nokunye kudlala indima enkulu endleleni yempilo yomuntu, yize kungamele kubenjalo.
Bekungikhathaza ukuthi kungenzeka ukuthi ngokuhamba kwesikhathi umhlaba ugqilaze lezi zingane ezimsulwa ngezinto ezenziwa izinkinga kungafanele, njengobuhlanga, ubuzwe, ubulili kanye nokunye.
Kodwa okunginika ithemba wukuthi sinomthethosisekelo oqinisekisa ukulingana ngaphansi komthetho kanti nezinhlelo nenqubomgomo kahulumeni iveza ukuzimisela ekwakheni isizwe esikuqinekisile ukulingana kwabantu.
Kunokuthi sibadalale, okwethu njengabahlali wukuqinisekisa ukuthi le nkululeko eyalelwa kanzima ivikelekile.
Ngithanda ukuphetha ngamazwi obuhlakani kaNelson Mandela athi:
“Ezinye izimo zibukeka zinzima ngaphambi kokuba zinqobeke.”
One of the saddest realities of our world today is that all individuals can still expect to be judged on trivialities they have no control over such as race and gender. The above article seeks to motivate people to work towards ensuring that this backward culture is relegated to only belong to history books.